ပန်းကလေးများနေ့ ~ White Angel
12:32 AM အဖြူရောင်နတ်သမီး 16 comments
ပန်းများလှိုင်လှိုင်ပွင့်လေ့ရှိသော Spring ဟုခေါ်သည့် နွေဦးရာသီပြီးဆုံး၍ ပူပြင်းခြောက်သွေ့သော နွေရာသီ၏ မေလကုန်နောက်ဆုံးနေ့ကို “နွေဦးကိုနှုတ်ဆက်သည့် ပန်းကလေးများနေ့” အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံတွင် ပွဲတော်တရပ်အနေဖြင့် နှစ်စဉ်ကျင်းပလေ့ရှိသည်။
ထိုနေ့တွင် ဆိုက်ပရပ်စ် နိုင်ငံအတွင်းရှိ ကျောင်းများမှ ကျောင်းသား/သူကလေးများသည် ရောင်စုံပန်းကလေးများ အသွင်ဖြင့်၎င်း၊ ပျား၊ပိတုန်း၊လိပ်ပြာလေးများအသွင်ဖြင့်၎င်း၊ ရောင်စုံဝတ်စုံလေးများကို ဆင်မြန်းဝတ်ဆင်ပြီး မြို့အတွင်း စီတန်းလှည့်လည်သော ပွဲတော်ကို “Flowers Day” ဟု တင်စားခေါ်ဆိုကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
ဗဟုသုတလေးပေါ့ . . .
ကျေးဇူးပဲ ညီမရေ. .
နတ်သမီးလေး ပါသလားလို့ ရှာလိုက်ရတာ...
ကောင်မလေးတွေ များတယ်နော် ပန်းပွဲတော်က
အဲလို ပွဲတွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်.
ပုံလေးတွေ ကြည့်ရတာ ပျော်စရာပဲ ..
သူတို့ ဆီက သူတို့ ဓလေ့ထုံးစံ တွေ မျှဝေပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ကျေးဇူးပဲ အစ်မ..။ တစ်ခေါက်လောက်တော့ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ကြုံဖူးချင်လိုက်တာ..။ တော်တော် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ အောက်က ကဗျာလေးနှစ်ပုဒ်လည်း ဖတ်သွားတယ်။ အနမ်းတွေကော အလွမ်းတွေကော.. လူနုံးပြီး ပြန်သွားတယ်။ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါ.. တာ့တာ
သူများနိုင်ငံက ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေတွေ့တိုင်း အားကျမိတယ် ဒီမှာတော့ပွဲတော့ရှိပါတယ်
ပန်းမြို့ တော်မှာနေသော မမနတ်သမီး ပါလား။ အထူးအဆန်းလေး အတွက် ကျေးဇူးတင်တယ် အမ။ ဒါနဲ့ ထူးအိမ်သင်က ပြောဘူးတယ်။ ဆိုက်ပရပ်စ် လမ်းဟာ အိပ်မက် လိုတဲ့။
ဗဟုသုတ တစ်ခု တိုးသွားရတာ ကျေးဇူးပါဗျာ
ပျားပုံစံ ဝတ်ထားတဲ့ ကလေးတွေ ပုံလေးက ချစ်စရာလေးပဲ။
လှတယ်။ ချစ်စရာလေးတွေနော် မမ..
မမနတ်သမီးလေး... ပျော်နေပြီပေါ့။ မနာလိုဘူးနော်... မုန့်တွေ ပူးတေဖို့ပါပိုစားခဲ့နော်။ မင်းလမ်းမုန့်တီသေချာစားခဲ့ပြီး သူများတွေ သွားရေယိုအောင် ဓါတ်ပုံသေချာလေးရိုက်ခဲ့နော်......
မမဘလော့ကို လင့်ထားတယ် သိလား... အရင်ထဲက လင့်မယ်လင့်မယ်နဲ့ မလုပ်ဖြစ်တာ... ခွင့်ပြုမယ်မှတ်လား...